December 2021 - ApannPyay Media
ထောင်ဒဏ်၃နှစ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေပေမယ့်ထောင်ဒဏ် ၆နှစ် ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဝင်းမင်းသန်း
December 31, 2021 by ApannPyay Media
ထောင်ဒဏ်၃နှစ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေပေမယ့်ထောင်ဒဏ် ၆နှစ် ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဝင်းမင်းသန်း Beauty Blogger ဝင်းမင်းသန်းဟာဆိုရင်အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆို နေထိုင်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တရားအတွက်ဆိုရင်ဘာကိုမှမကြောက်တဲ့ မဝင်းမင်းသန်းကို စစ်ကောင်စီဘက်မှ ဧပြီလကတည်းက ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့မှာတော့Glow Nation မဝင်းမင်းသန်းကို ထောင်ဒဏ်အမိန့်ချလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦးသတင်းတွေအရGlow Nation မဝင်းမင်းသန်းကိုအလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ်၃နှစ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေပေမယ့်တကယ်တမ်းတော့ ထောင်ဒဏ်၆နှစ်တိတိ ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ရှေ့နေဖြစ်သူရဲ့အဆိုအရ သိရပါတယ် မဝင်းမင်းသန်းကို ပုဒ်မ၅၀၅- က ဖြင့်ထောင်ဒဏ်၃နှစ် ၊မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်၃နှစ်စုစုပေါင်း၆နှစ်တိတိ ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့မှာတော့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူ့အချစ်တော်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဦးလူမင်း၊ရဲတိုက်၊အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ပြေတီဦး၊တေးသံရှင်စောဖိုးခွား၊အဆိုတော်ပိုပိုနှင့်Beauty Blogger မဝင်းမင်းသန်းတို့ အားလုံးကိုထောင်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ေထာင္ဒဏ္၃ႏွစ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေနေပမယ့္ေထာင္ဒဏ္ ၆ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံလိုက္ရတဲ့ ဝင္းမင္းသန္း Beauty Blogger ဝင္းမင္းသန္းဟာဆိုရင္အရမ္းကိုခ်စ္ဖို႔ေကာင္းၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆို ေနထိုင္တတ္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။အမွန္တရားအတြက္ဆိုရင္ဘာကိုမွမေၾကာက္တဲ့ မဝင္းမင္းသန္းကို စစ္ေကာင္စီဘက္မွ ဧၿပီလကတည္းက … Read more
ဟိုတုန်းကဆောင်း (အရမ်းလွမ်းဖို့ကောင်းတယ် ဖတ်ကြည့်) သစ်ရွက်ခြောက်တွေ ကြွေတဲ့ရာသီ ရောက်ပြီ၊မြောက်ပြန်လေတွေလည်း တိုက်လာပြီ။ဒီအချိန်ဆို အလွမ်းတွေဟာလည်းနှင်းတွေလို ဝေပြီ . . . ။အလွမ်း . . . တဲ့။ဘာတွေကို လွမ်းတာလဲ။ ငယ်ဘဝကို လွမ်းတယ်အပူအပင်ကင်းတဲ့ ကလေးဘဝကို လွမ်းတယ်။ထန်းလက်ခြောက်တွေကို ခုတ်လှည်းလုပ်ပြီးမီးလှုံဖို့ ထင်းခြောက်ကလေးတွေလိုက်စုဖူးတယ်။ ပုံထားတဲ့ ထန်းသီးတွေက ထွက်နေတဲ့ထန်းစို့(ထန်းမြစ်)တွေကို တူးပြီးမီးလှုံရင်း ဖုတ်စားဖူးတယ်။တစ်ခါတလေလည်း အမေကထန်းမြစ်တွေကို အမြီးဖြတ်ပြီးအိုးကြီးကြီးတစ်လုံးနဲ့ပြုတ်ညီအစ်ကို မောင်နှ‌မတွေဝိုင်းဖွဲ့ လုယက်စားဖူးတယ်။ ထန်းမြစ်ဖုတ်ကို သင့်တော်ရုံ ဆစ်ပိုင်းပြီးဆီ မနှံ့တနှံ့ စမ်းလို့ထမင်းခြမ်းအေးနဲ့ဆောင်းတွင်းရဲ့ မနက်စာကိုအားရပါးရ စားဖူးတယ်။ ထန်းမြစ်တူးလို့ ပြတ်ကျန်ခဲ့တဲ့ ထန်းသီးတွေကိုထန်းသီးတီပြတ်ဆိုပြီး ခွဲစားရတဲ့အရသာဒါဟာ ငယ်ဘဝရဲ့ နတ်သုဒ္ဓါပဲ။မနက်ခင်း အလင်းရောင်မလာခင်အမေကြီးရဲ့ တရှဲရှဲနဲ့ သစ်ရွက်ခြောက်တွေ သိမ်းနေတဲ့အသံအဲဒီအသံဟာ သစ်ပင်တွေ ရှားပါးလာတဲ့အခုလိုအချိန်မှာ သူဟာလည်း ရှားပါးသံ ဖြစ်လာပြီ … Read more
ကျောင်းသား လူငယ်များ အတွက် Google သုံးနည်း လမ်းညွှန်
ကျောင်းသား လူငယ်များ အတွက် Google သုံးနည်း လမ်းညွှန် ကျောင်းသား လူငယ်များ အတွက် Google သုံးနည်း လမ်းညွှန်Google သုံးတတ်ရင် တော်ရုံကတော့ အေးဆေးပဲနော်….. လေ့လာကြည့်ကြပါဦး ပြည်တွင်းရှိ ကျောင်းသားများအတွက် Google သည် မရှိမဖြစ် အရာတစ်ခုဟုသာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကျောင်းသားအများစုက မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို သေချာစွာ သိရှိခြင်း မရှိသေးပေ။ မိမိရှာဖွေလိုသည့် အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များကို တိကျစွာရှာဖွေခြင်း၊ သိမ်းဆည်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ကို သေချာစွာ မသိရှိခြင်းကြောင့် အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်း၊ ငွေကုန်ကြေးကျ များရသည့် အဖြစ်မျိုးနှင့်လည်း ကြုံနေရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အခြေအနေများရှိသည့် အတွက် ပြည်တွင်းရှိ ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် Google အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်အနေနှင့် အချက်အလက်များ ရှာဖွေခြင်း၊ သိမ်းဆည်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့အတွက် … Read more
လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံ၅၀တန်အစုတ်လေးနဲ့ ကလေးမျက်နှာက မဝံ့မရဲလေးမို့
လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံ၅၀တန်အစုတ်လေးနဲ့ ကလေးမျက်နှာက မဝံ့မရဲလေးမို့ မုန့်လာဝယ်တဲ့ ကလေး လက်ထဲက (၅၀) တန်အစုတ်.. ကလေးနှင့် စိတ်ထဲ၊ စွဲထင်သွားတဲ့ အရာ.. ကလေး တစ်ယောက် ဆိုင်ထဲဝ င်လာပြီး မုန့်လာဝယ် ပါတယ်..ကလေးမျက်နှာက မဝံ့မရဲလေးမို့.. လက်ထဲ၊ ကိုင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံကို ဦး ခဏကြည့်.. မယ်နော်လို့ ပြော လိုက်တော့ ဖွဖွလေး ကိုင်ထားတဲ့၊ ပိုက်ဆံကို ပေးပါတယ်.. ပိုက်ဆံက ကျွန်တော်၊ ထင်ထားသလို စုတ်ပြဲ နေပါတယ်၊ ကလေးတွေဟာ စုတ်ပြတ်နေတဲ့.. ပိုက်ဆံကို ဖြန့်ပြီး မပေးကြဘူး၊ အသာအယာ.. လေးကိုင်လာပြီး ပေးတတ်ကြတယ်.. ဆိုင်ရှင် အတော်များ များကလည်း ဈေးဝယ်ရှုပ်တဲ့.. အချိန်ဆို၊ ပိုက်ဆံကို ဖြန့်မ ကြည့်တတ် ကြဘူးလေ..ဘာလို့ပိုက်ဆံကို ဖြန့်ပြီးမပေး … Read more
ဆောင်းရာသီမှာ အသားအရေ GLOW နေစေဖို့ ပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့ အလှအပထိန်းသိမ်းနည်း (၇) မျိုး ရာသီဥတုအေးလာတာနဲ့အမျှ ပုံမှန်ထက် အသားခြောက်လာတာ၊ အသားအရေကြမ်းတမ်းလာတာနဲ့ အသားအရောင်မွဲလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာကြောင့် ဒါတွေမဖြစ်ရအောင် ဆောင်းရာသီအဝင်ကတည်းက အကျင့်ပြုလုပ်ထားသင့်တဲ့ သဘာဝအသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းတွေ အကြောင်းကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့ Skincare နည်းတွေက လုပ်ရလွယ်တဲ့အပြင် သင့်အသားအရေကို ခြောက်သွေ့ခြင်းကင်းပြီး နေရောင်ထိုးထားသလို အမြဲ Glow နေစေဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ၁=Alcohol နဲ့အမွှေးနံ့ပါတဲ့ Skincare ပစ္စည်းတွေရှောင်ပေးပါ Cosmetic တွေမှာပါဝင်တဲ့ အမွှေးနံ့လို ဓာတုပစ္စည်းတွေက အသားခြောက်ပြီးယားယံခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်တာကြောင့် ဒီလိုရာသီမှာ အနံ့နဲ့ Alcohol ဓာတ်တွေမပါဝင်တဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေး၊ Toner တွေကိုအသုံးပြုပေးဖို့လိုပါတယ်။ ၂=ထောပတ်သီးနဲ့ သံလွင်ဆီတို့ အသုံးပြုပြီးမျက်နှာပေါင်းတင်ပေးပါ သံလွင်ဆီဟာဆိုရင် အသားအရေနဲ့ဆံသားတို့ကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးနိုင်ပြီး အညစ်အကြေးတွေ သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့အဆီတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။သံလွင်ဆီနဲ့ ထောပတ်သီးပါဝင်တဲ့ … Read more
လူတိုင်းနီးပါး မုန့်ဟင်းခါးထဲ ထည့်စားတတ်တဲ့ အကြော် ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ မြန်မာတွေကြိုက်လှတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး မှာ ပါတဲ့ အကြော် ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဒီနေ့ မြောက်ပြင်ဘက်သွားရင်း မုန့်ဟင်းခါးသည်မြင်တော့ ဗိုက်ဆာတာနဲ့ ဝင်စားမိတယ်…။ အရမ်းကြိုက်တာလဲ ပါတာပေါ့…. ဟယ် ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်ဆိုပီး အကြော်ပိုလေးနဲ့ ဟင်းရည်လေးတောင် တောင်းသောက်လိုက်သေးတယ်….။ အကြော်လေးကကောင်းလိုက်တာဆိုပီး အကြော် လေး ၂၀၀ဖိုး အပိုရောင်းပေးပါဆိုပီး စားမိတော့ အရမ်းကြိုက်ပီး အထုတ်ကြီး တထုတ်လောက် ထပ်ရောင်းပေးပါ လို့ ဝယ်ရော….။ ဇာတ်လမ်းကအဲ့မှာစတာပဲ အပိုမရှိတာမို့ ရောင်းပေးလို့မရလို့ပါတဲ့ အာ့နဲ့ ကိုယ်တွေကလည်းကြိုက်မိရင်ဇွတ်ဆိုတော့ ပိုက်ဆံ ပေးခဲ့ပါမယ် နက်ဖြန်မှ လာယူပါ့မယ်ပြောမိရော…။ (သူ့အကြော်ကလည်း မွ ရွပြီး ကောင်းတာကို) ကိုယ်ပုံကြည့်ပီး ဇွတ်စားတော့မယ်ရိပ်မိသွားတဲ့ ဆိုင်ရှင်က ဘယ်လိုစားမှာလည်းတဲ့ …. ဟင် ဘာလားပေါ့…။ … Read more
ဇက်ချိုးတာ အကျင့်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဇက်ညောင်းလာရင်ဇက်ကိုဘယ်ညာဂျွတ်ခနဲဂျွတ်ခနဲတဗြောင်းဗြောင်းချိုးတတ်တဲ့သူတွေ…… အဲ့လို သတိလက်လွတ် ချိုးလိုက်တဲ့အခါ အားရသလိုအညောင်းပဲချက်ချင်းပြေသွားသလိုထင်ပေမယ့်ဇက်ကအာ့လို မချိုးရဘူး ။ တကြိမ်တခါတောင် သတိလွတ် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ မလုပ်သင့်တာမျိုး နာ့ဗ်ကြောသေးသေးမျှင်မျှင်လေးတွေကျိုးကျေပြတ်သွားတာများလာရင် ကိုယ်ခန္ဓာ လှုပ်ရှား မှု က နှေးလာ လေးလာပါလိမ့်မယ် ။ လေဖြန်းတာမျိုး ကအသက် ငယ်ငယ်ကြီးကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်ခနခနသတိမေ့တတ်လာလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် အစားအသောက် အနေအထိုင် နဲနဲလေးမှားလိုက်တာနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းရောဂါ လွယ်ကူစွာရတတ်ပါတယ်တဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လည်ပင်းနဲ့ဇက်တစ်ဝိုက်မှာ ပင်မအာရုံကြောကြီးကိုဝန်းရံထားတဲ့ မိုက်ခရိုနာ့ဗ် ကြော အမျှင်တွေအများကြီးရှိနေတာမို့ ပါ။။။ဒါကြောင့် လုံးဝလုံးဝမလုပ်သင့်ပါ credit ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှတင်ပေးနေတာမို့pageထဲကိုဝင်ရောက်လေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ဇက္ခ်ိဳးတာ အက်င့္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ဇက္ေညာင္းလာရင္ဇက္ကိုဘယ္ညာဂၽြတ္ခနဲဂၽြတ္ခနဲတေျဗာင္းေျဗာင္းခ်ိဳးတတ္တဲ့သူေတြ…… အဲ့လို သတိလက္လြတ္ ခ်ိဳးလိုက္တဲ့အခါ အားရသလိုအေညာင္းပဲခ်က္ခ်င္းေျပသြားသလိုထင္ေပမယ့္ဇက္ကအာ့လို မခ်ိဳးရဘူး ။ တႀကိမ္တခါေတာင္ သတိလြတ္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ မလုပ္သင့္တာမ်ိဳး နာ့ဗ္ေၾကာေသးေသးမၽွင္မၽွင္ေလးေတြက်ိဳးေက်ျပတ္သြားတာမ်ားလာရင္ … Read more
သဘာဝရှားစောင်းလပတ်ဖျော်ရည်သောက်ကြမယ် ၁. ပထမဦးစွာ ရှား​စောင်းလပတ်ကို ရေဆေးအခွန်နွှာအသေးလေးတွေလှီး ၂. သကြားရေထည့်( သကြားကိုရေနွေးဖြူနဲ့သမအောင်အရင်မွှေပါ ဆားပါတစ်ခါတည်းထည့်မွှေပါ) ၃. သံပုရာသီး အနည်းငယ်ထည့်သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်ကောင်းပြီးဆေးဘက်ဝင်ပါတယ် (မိတ်​ဆွေတို့ကို သောက်စေချင်ပါတယ် ) အသားရေ စိုပြေပါတယ် ဝက်ခြံလည်း သက်သာပါတယ် အပူငြိမ်းစေပါတယ် ဆီးရွှင် စေပါတယ် ကျောက်ကပ်အတွပ်လည်း ကောင်းပါတယ် တခြား အသုံးဝင်ပုံတွေအများကြီးရှိပါသေး စာရှည်မှာဆိုးလို့ဆက်မရေးတော့ပါ Credit သဘာဝရွားေစာင္းလပတ္ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ၾကမယ္ ၁. ပထမဦးစြာ ရွား​ေစာင္းလပတ္ကို ေရေဆးအခြန္ႏႊာအေသးေလးေတြလွီး ၂. သၾကားေရထည့္( သၾကားကိုေရေႏြးျဖဴနဲ႔သမေအာင္အရင္ေမႊပါ ဆားပါတစ္ခါတည္းထည့္ေမႊပါ) ၃. သံပုရာသီး အနည္းငယ္ထည့္သုံးေဆာင္နိုင္ပါၿပီ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ေကာင္းၿပီးေဆးဘက္ဝင္ပါတယ္ (မိတ္​ေဆြတို႔ကို ေသာက္ေစခ်င္ပါတယ္ ) အသားေရ စိုေျပပါတယ္ ဝက္ၿခံလည္း သက္သာပါတယ္ အပူၿငိမ္းေစပါတယ္ ဆီးရႊင္ ေစပါတယ္ ေက်ာက္ကပ္အတြပ္လည္း … Read more
မိုးလေဝသပညာရှင် မစုစုစံရဲ့ နှစ်သစ်ကူး မိုးခန့်မှန်းချက်
မိုးလေဝသပညာရှင် မစုစုစံရဲ့ နှစ်သစ်ကူး မိုးခန့်မှန်းချက် Happy New Year in Myanmar ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလ ၁ရက်နေ့တွေမှာ ကယားပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသတွေမှာ မိုးဖွဲလေးများရွာသွန်းနိုင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတွင်မိုးအသင့်အတင့်ရွာနိုင်ပါတယ် ကျန်တစ်နိုင်ငံလုံး New Year မှာသာသာယာယာရှိပါမယ် 2022 မိုးရာသီအတွက် လိုအပ်သော weather data အချက်အလက်များစွာကို ဝယ်ယူနေပါတယ် မကြာမှိရက်အတွင်း မင်းဂွတ်သီးလေးရဲ့ Lonk kick များကို တင်ပေးသွားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် အများပြည်သူအကျိူး တောင်သူလယ်သမားများ စိုက်ပျိုးရေးသမားများ နှင့် ရာသီဥတု မိုးလေဝသကို တည်မှိလုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် ကိုယ်ကျိုးမဖက် အားကျိုးမာန်ထက်လုပ်ဆောင်သွားပါမယ် 30/12/2021 ရက်နေ့ ဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် တွေမှာ မိုးတိမ်မိုးသားဖုံးအုပ်မှုရှိနိုင်သော်လည်း ပျက်စီးမိုးဖျက်မိုးရွာနိုင်ဖွယ်မရှိပါဘူး … Read more
၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးယတြာ
၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးယတြာ လာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့ဟာ စနေနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့အတွက် နေ့နံအလိုက် နှစ်သစ်အကြို အထူးယတြာအစီအရင်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီယတြာကို နှစ်သစ်အစ ဇန်နဝါရီ (၁) ရက်မှာ စီရင်နိုင်ခဲ့ရင် တစ်နှစ်လုံး ဘေးကင်းရန်ကွာပြီး လိုရာပြည့်စေဖို့ အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဇန်နဝါရီ (၁) ရက် စနေနေ့ မနက် ၉ နာရီ ၂၅ မိနစ်နဲ့ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်အတွင်း တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာ အိမ်ကဘုရားမှာ ကြေးဖလားနဲ့ သောက်တော်၊ သုံးတော်ရေ ကပ်လှူပါ။ “အရဟံ” ဂုဏ်တော်ကို သက်စေ့ထက် တစ်ခေါက်ပိုပြီး ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ။ ဒီနေ့မှာ နေမဝင်ခင်အထိ အဝစားထားသင့်ပြီး … Read more